गुगलमा भिखारी खोज्दा पाकिस्तानी प्रधानमन्त्री र ट्वाइलेट पेपर सर्च गर्दा पाकिस्तानी झण्डा ! – Idea Khabar
गुगलमा भिखारी खोज्दा पाकिस्तानी प्रधानमन्त्री र ट्वाइलेट पेपर सर्च गर्दा पाकिस्तानी झण्डा !
आइडिया खबर२०७६ भाद्र २५, बुधबार १४:०९
एजेन्सी – गुगल सर्च इन्जिनमा विभिन्न सामग्रीहरु खोजी गर्दा देखापर्ने नतिजाहरु कहिलेकाहीँ निकै विवादास्पद् हुने गरेका छन् । अहिले गुगल यस्तै एउटा नतिजाको कारण विवादमा परेको छ । गुगल सर्च इन्जिनमा भिखारी Bhikhari शव्द टाइप गरी तस्वीर सर्च गर्दा पाकिस्तानी प्रधानमन्त्री इमरान खानका तस्वीरहरु देखिने गरेका छन् ।
गुगलको पाकिस्तान, भारत तथा अमेरिकालगायतका डोमेनहरुमा यस्तो देखिने गरेको छ । गुगलमा भिखारी खोज्दा पाकिस्तानी प्रधानमन्त्रीको तस्वीर कहिलेदेखि देखा पर्न थालेको भन्ने प्रष्ट नभए पनि पहिलोपटक सन् २०१८ को डिसेम्बरमा यस्तो देखिएको बताइएको छ ।
स्मरणरहोस् केही महिनाअघि गुगलमा ट्वाइलेट पेपर सर्च गर्दा पाकिस्तानी झण्डाको तस्वीर देखा परेपछि त्यसले विवाद सिर्जना गरेको थियो । त्यस्तै इडियट शव्द खोजी गर्दा अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको तस्वीर देखिने गरेको छ । यसबारेमा गुगलले अमेरिकी संसदमै स्पष्टीकरण दिनु परेको थियो ।
चिनमा हिराजडित सुनको ट्वाइलेट प्रदर्शन,सी ले गरे उद्धाटन (भिडियो सहित)
२०७६ कार्तिक २६, मंगलवार १३:२४
यस्ता हुन्छन् सेक्सको बारेमा युबतिहरुका अनौठा चाहाना
२०७६ आश्विन १, बुधबार १५:३४
यसकारण महिलाहरुले गाँजर खानु हुँदैनः-
२०७६ माघ २३, बिहीबार २२:३९
दुनियाँका अनौठा रोचक तथ्यहरु
२०७६ पुष १३, आईतवार १४:४७
२२१ जना केटासँग प्रेम असफल भएपछि कुकुरसँग बिबाह गरिन् मोडलले(भिडियो सहित)
२०७६ भाद्र २८, शनिबार १४:३८